Telecom kabinet jụrụ Suppliers na Factory - China Telecom kabinet jụrụ Nsuputa
Okpomọkụ Exchanger maka Telecom ...
Thermosiphon Heat Exchanger ...
BlackShields n'èzí integrated kabinet e mere maka mobile nkwukọrịta ekesa base ọdụ, nke nwere ike izute arịrịọ maka n'èzí nkwurịta okwu gburugburu ebe obibi na echichi. Enwere ike itinye ọkụ eletrik, batrị, akụrụngwa nkesa eriri (ODF), akụrụngwa na-achịkwa ọnọdụ okpomọkụ (ikuku ikuku / ihe ntụgharị ọkụ) n'ime kabinet iji zute arịrịọ ndị ahịa dị ka ụlọ ahịa otu nkwụsị.
BlackShields HC usoro Combo Air conditioner emebere dị ka ihe nchekwa ike maka ịchịkwa ihu igwe nke kabinet na gburugburu ime ụlọ na n'èzí siri ike. Ejikọtara AC ikuku ikuku na DC Thermosiphon Heat Exchanger, ọ na-edozi nsogbu okpomọkụ nke ime ụlọ / n'èzí ma nweta ike kachasị ike.
BlackShields HM usoro DC Thermosiphon Heat Exchanger bụ maka ịchịkwa ihu igwe nke ime ụlọ/n'èzí na gburugburu ime ụlọ na n'èzí siri ike. Ọ bụ sistemụ jụrụ oyi nke na-eji ike na-agbanwe oge na-eme ka ọ dị jụụ n'ime ụlọ kabinet. Ọ na-edozi nsogbu okpomọkụ nke ụlọ dị n'èzí ma na-ejikarị ya eme ihe n'ime ime ụlọ na n'èzí na mkpuchi na ngwá electronic nwere mmetụta.
Nke a unit na-eji n'ụzọ zuru ezu utilizes ọdịdị okpomọkụ dị n'ime ụlọ na n'èzí. A na-eme ka okpomoku dị n'ime ụlọ dị jụụ site na iji evaporation refrigerant na-arụ ọrụ nke ọma. The passive okpomọkụ mgbanwe dabeere eke convection, nke na-ekesa mmiri mmiri na a vetikal mechiri emechi loop sekit na-enweghị chọrọ a ot mgbapụta ma ọ bụ compressor.
Okpomọkụ Exchanger maka Telecom kabinet
Emebere BlackShields HE usoro ikpo ọkụ dị ka ihe ngwọta jụrụ oyi maka ịchịkwa ihu igwe nke ime ụlọ / n'èzí na gburugburu ime ụlọ na n'èzí na-ama aka. Ọ na-eji okpomọkụ ikuku dị n'èzí, na-agbanwe ya n'ime ihe mgbake dị elu na-arụ ọrụ nke ọma ma si otú ahụ mee ka ikuku dị n'ime ụlọ dị n'ime ụlọ ahụ na-emepụta ihe dị n'ime, nke dị mma mechiri emechi. Ọ na-edozi nsogbu okpomọkụ nke ụlọ dị n'èzí ma na-ejikarị ya eme ihe n'ime ime ụlọ na n'èzí na mkpuchi na ngwá electronic nwere mmetụta.
BlackShields TC TEC Peltier jụrụ oyi maka kabinet bụ maka ime ka kabinet dị n'ime ime/èzí dị jụụ na gburugburu ime ụlọ na n'èzí siri ike. Ọ na-eji teknụzụ thermoelectric emebere ya maka ọkọnọ 48V DC. Ọ nwere ike wepu oke okpomọkụ na ngwa eletrọnịkị dị ka batrị n'ime obere ogige ma bụrụ ezigbo nhọrọ maka ime ụlọ batrị jụrụ oyi.
BlackShields DC Ikuku ikuku e mere maka ịchịkwa ihu igwe nke akụrụngwa na saịtị ndị a na-adịghị grid nwere ihe ịma aka ime ụlọ na n'èzí. Site na ezigbo DC compressor na DC Fans, ọ na-edozi nsogbu okpomọkụ nke ime ụlọ / n'èzí ma bụrụ ezigbo nhọrọ maka ọdụ ụgbọ ala nwere ike imeghari ma ọ bụ ike ngwakọ na saịtị ndị dịpụrụ adịpụ.
BlackShields AC series Air conditioner emebere maka ịchịkwa ihu igwe nke ụlọ ọrụ telecom na gburugburu ime ụlọ na n'èzí siri ike. Site na obere ikuku ikuku na ikuku na-ekesa nke ọma, ọ na-edozi nsogbu okpomọkụ nke ụlọ ime ụlọ / n'èzí ma bụrụ ezigbo nhọrọ maka ngwa telecom.